१७ वर्षीया किशोरीको बयान- त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो ‘क रणी’ गरे ! – Sanchar Patrika
१७ वर्षीया किशोरीको बयान- त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो ‘क रणी’ गरे !
July 25, 2020 261
यो समाचार पनि पढ्नुहोस,महोत्तरी,साउन । बर्दिबास प्रहरीले करोडौं रुपैयाको डिप बोरिङ मेसिन भन्सार छली गरेर नेपाल भित्रिदै गरेको अवस्थामा नि यन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले चेकजाचको क्रममा बुधबार दुई करोड बराबरको मेसिन जडित ट्रक नि यन्त्रणमा लिएसँगै भन्सार छलीको तथ्य बाहिरिएको हो ।
बुधबार बर्दिबासमा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा महाराष्ट्र र मध्यप्रदेश दर्ता रहेका डिप बोरिङ मेसिन जडान गरिएका दुई ट्रक केए ५१ एमएच–३६५५ र एमपी ०९ जीई–९१३१ नि यन्त्रणमा लिएको हो । ती दुई ट्रकमा भन्सार छली सिँचाई र खानेपानी प्रयोजन डिप बोरिङमा प्रयोग हुने मेसिन र औजार ल्याएका थिए ।
प्रहरीले नि यन्त्रणमा लिएको दुई भारतीय ट्रकलाई छोडाउन यतिवेला भन्सार एजेन्टमार्फत् चलखेल गरी तुरुन्तै भन्सार बुझाई छुटाउने समेत गरेको पाइएको छ। अहिले समातिएका दुई ट्रकलाई समेत छुटाउन ट्राफिक प्रहरीलाई बर्दिबास नगरपालिकाले चिठ्ठी जारी गरिसकेको पाइएको छ।
अहिले समातिएका भन्सार फेलसँगै राजस्व छ ली गरिएका मेसिनहरुले एसियन बोरिङका भारतीय नागरिक बलजित सिंघमार्फत् नेपालमा काम गर्दै आइरहेका छन् । चितवनमा बसोबास गरिरहेका सिंह यतिवेला प्रहरीको नि यन्त्रणमा रहेको ट्रक छुटाउन लागी परेका छन् ।
Prevविश्व रेकर्ड बनाएका विजयलाई ‘झुटो’ भन्नेले यो भिडियो हेर्नु, हजारौको भिडमा देखाइदिए प्रमाण
Nextबिजय शाहीको घरमा पहिलो पट्क पुग्दा जे देखियो (भिडियो)
सरकारले दुई लाख जनालाई दिन लागेको रोजगारी कस्ताले पाउँछन् ?
कतार एयरवेजले काठमाडौंबाट साताको तीन उडान गर्ने जानकारी दिएको छ ।
मास्क लगाउन आग्रह गर्दा यात्रुले गरे निर्घात कुटपिट, बसचालक मृ,त्युको मुखमा